Fastpay Amakhasino - Ukubhaliswa, Indawo Esemthethweni, Ukuqinisekiswa
Izici zokubhaliswa e-Fastpay casino
Kungani udinga ukubhalisa
Ubani ongabhalisa kusayithi
Ukubhaliswa kuwebhusayithi yekhasino ye-Fastpay
Imininingwane ebalulekile ngokubhaliswa
Ngaphandle kwenani elikhulu lamakhasino aku-inthanethi avele njalo kwi-Intanethi, umkhiqizo osemusha we- Fastpay Casino uzuza ukuqiniseka futhi ungazisholo ukuthi ungomunye wamakhasino amahle kakhulu. Iqembu lisebenza ngaphansi kwelayisense elinenombolo yokubhalisa engu-8048/JAZ2020-013 ekhishwe uhulumeni waseCuracao. Inqubomgomo yesayithi igxile ekwakheni izimo ezikahle kakhulu zokugembula okuthokozisayo, kanye nokugcwaliswa okusheshayo nokukhishwa kwemali okuwinwe.
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani izivakashi zidinga ukubhalisa e- Fastpay Casino . Okuyinhloko kungenzeka ukuthola isimo selungu elisemthethweni leklabhu, okuvula amathuba amaningi wabasebenzisi.
Ngaphezu kokuthola iphakethe lokwamukela, elinikezwa bonke abaqalayo, lesi sikhungo senza inqubo yokugembula ijabulise ngangokunokwenzeka ngenxa yokukhushulwa, amakhodi wokuphromotha, izikhuthazo ezahlukahlukene ngendlela yama-spins amahhala nohlelo lwe-VIP. Futhi, izivakashi ezisebenzayo zingathola izipho zamaholide, usuku lokuzalwa, njll.
Esinye isizathu sokwenza i-akhawunti yomuntu siqu kuwebhusayithi esemthethweni ye-Fastpay yekhasino iqoqo elikhulu lemishini yama-slot evela kubathuthukisi abahamba phambili. Ukuwadlalela imali yangempela kungakhuphula kakhulu ukushesha kwe-adrenaline futhi kwanelise isifiso senjabulo.
Amaklayenti abhalisiwe akhombisa imininingwane yomuntu, ngakho-ke, avumela ukuphathwa kwesikhungo ukulawula iminyaka yezivakashi zaso, ngaphandle kokuhlala kuwebhusayithi esemthethweni yezingane.
Abasebenzi bakulesi sikhungo baqinisekise ukuthi inqubo yokubhalisa ayiphazamisi abasebenzisi futhi iyenze ibe lula ngangokunokwenzeka. Ngeke kubangele ubunzima ngisho nakwabaqalayo abathathe isinqumo sokujwayela umhlaba wokugembula okokuqala. Inqubo ivunyelwe:
izakhamizi ezindala zalawo mazwe umthetho wawo ongakuvimbeli ukwenziwa kokuzilibazisa okunjalo esikhaleni esibonakalayo;
abasebenzisi abangenankinga nokulutha kwezokugembula futhi abekho kuhlu lwezivakashi ezingafuneki ekusungulweni.
Izakhamizi zamazwe angaphezu kwekhulu zingabhalisa ngokusemthethweni ekhasino iFastpay. Phakathi kwabo kukhona amazwe e-CIS, kanye naseduze phesheya. Izakhamizi zase-UK, e-USA, eSpain, kwa-Israyeli nakwamanye amazwe abavunyelwe ukudala i-akhawunti kulesi sikhungo. Isibopho sokungalandeli imithetho kanye nomthetho sikubadlali, ngakho-ke, ngaphambi kokuqhubeka nokubhaliswa, kufanele uzijwayeze nemithetho elawula ukugembula esifundeni ohlala kuso.
Izivakashi ezingaphansi kweminyaka akufanele zizame ukukhohlisa uhlelo futhi zinikeze imininingwane engamanga, ngoba phakathi nenqubo yokuqinisekisa, ukukhohlisa kuzovezwa futhi i-akhawunti izovinjelwa. Abasebenzisi banokufinyelela kusayithi futhi banqume ngokuzimela ngesidingo sale nqubo.
Noma imuphi umgembuli onqume ukusebenzisa ngokunenzuzo okunikezwayo kwesiza futhi aqale ukudlala imali yangempela angavula i-akhawunti yakhe ekhasino. Inkinobho yokubhalisa isekhasini eliyinhloko lewebhusayithi esemthethweni phezulu kwesikrini. Ngemuva kokuchofoza, iwindi livela nezinkambu ezidinga ukucaciswa:
ikheli langempela lebhokisi le-imeyili elingelomdlali;
imali ezosetshenziselwa i-akhawunti yesikhathi esizayo.
Kuyadingeka futhi ukuqinisekisa ukuthi iklayenti likhulile futhi, lapho ifunde imithetho ngokucophelela, liyavumelana nayo. Ngaphezu kwalokho, uma ufisa, umsebenzisi angafaka ikhodi yephromoshini, uma enayo.
Ngemuva kokuphothulwa, ukuphathwa kwesayithi kuthumela incwadi kwiklayenti ekhelini le-imeyili elichazwe nguye. Iqukethe isixhumanisi sokuvula esizokuvumela ukuthi uqedele inqubo yokubhalisa.
Ngemuva kokuthola ukufinyelela ku-akhawunti yomuntu siqu, umgembuli kufanele anikeze imininingwane eminingi ngaye. Ukuze wenze lokhu, kufanele ukhombise igama lakho eligcwele, usuku lokuzalwa, ubuzwe, inombolo yocingo yomuntu siqu ngaphandle kwamaphutha. Ngemuva kwalokho kuphela lapho kufanele uye esigabeni se- "Cashier" bese uqala ukugcwalisa idiphozi.
Amakhasimende abhalisiwe angabhekana nenqubo efana nokuqinisekiswa. Isetshenziswa ukuphathwa kwesikhungo ngenxa yezizathu eziningana, okuyinhloko yilezi:
ukuqinisekiswa kweningi lomsebenzisi;
izinsolo zezenzo zokukhwabanisa eziphikisana nengxenyekazi eku-inthanethi noma uhlelo lokukhokha;
ukuvakashelwa komsebenzisi kusayithi kusuka kumakheli ahlukile we-IP;
isiqinisekiso sokuthi ungubani umgembuli onqume ukuhoxisa inzuzo;
lapho kuhoxiswa ama-winnings, inani lawo elingaphezu kwama-dollar ayizinkulungwane ezimbili zase-US.
Inqubo izodlula ngaphandle kwezinkinga uma umgembuli, ngenkathi enza i-akhawunti, akhombise kahle imininingwane yakhe futhi wagcwalisa kahle uhlu lwemibuzo ku-akhawunti yakhe. Abaphathi besiza babheka ngokucophelela imininingwane etholwe kubasebenzisi futhi, uma kutholakala ukungahambisani, bangamisa ukumiswa kwezimali kuze kube kucaciswa izimo.
Lapho ubhekene nenkinga efanayo, ungakhathazeki. Kuyadingeka ukuthi uxhumane nensizakalo yokusekelwa kwezobuchwepheshe, okuthi nganoma yisiphi isikhathi esikahle iklayenti izosiza ukuxazulula zonke izingqinamba ezivelile.
Ukuqinisekisa kusho ukunikezwa kwemibhalo enjalo: amakhasi askenwe epasipoti enesithombe somnikazi nesibonakaliso sendawo yokubhalisa. Inombolo nochungechunge lukamazisi kungashiywa. Uzodinga futhi isithombe-skrini esinedatha yokugcwaliswa kwesikhwama se-elekthronikhi noma isitatimende ekhadini elisetshenziselwe ukugcwalisa idiphozi nokukhipha imali. Ezimweni ezibucayi kakhulu, abezokuphepha bangacela umgembuli ukuthi athathe "i-selfie" ephethe idokhumende ngesandla kanye nesiqinisekiso sosuku okwathathwa ngalo isithombe.
Zonke izici zokuqinisekisa zingatholakala kuwebhusayithi yekhasino elikhokha ngokushesha
Kunemithetho eminingi maqondana nokwenziwa kwe-akhawunti kusayithi elisemthethweni lesiza, okungafanele ikhohlwe. Okokuqala, iklayenti kufanele likhumbule ukuthi linelungelo lokuba neyodwa kuphela:
ikhadi lasebhange noma i-e-wallet;
Ukuphathwa kwesikhungo kubheka ukuthi abadlali banamaphrofayli womuntu amabili noma ngaphezulu njengokukhwabanisa futhi ubavimba ngokushesha ngemuva kokubona ukwephulwa. Ezimweni eziningi, imali ebhalansi iyathathwa.
Uma, ngenkathi kufakwa inkambu yokubhalisa, iklayenti likhombise uhlobo lwemali olungalungile, lingahlala likulungisa lokhu ku-akhawunti yalo ngokushintsha i-akhawunti yemali esigabeni esifanele.
Ukuqinisekisa ukuphepha kwedatha yomuntu siqu, isiza sithatha izinyathelo eziningi zokuphepha futhi simema abasebenzisi ukuthi benze okufanayo. Akufanele unikeze ukufinyelela kuphrofayili yakho kuwebhusayithi esemthethweni ye-Fastpay casino kubantu besithathu, futhi ubanikeze ne-password.
Isiza siqinisekisa ukuphepha kwemininingwane yomuntu futhi asikuvumeli ukuthi singene kwisevisi yentela, ama-ejensi okuphoqelela umthetho noma abantu besithathu. Zingahlolwa ngenani elilinganiselwe labasebenzi besayithi elibonakalayo ngezinga elifanele lokuphepha.
Ukuze kuqedwe ukusola kwezenzo zomgunyathi, ukuphathwa kwesikhungo kungangeza ngokucela imibhalo kwiklayenti ukuze iqinisekiswe.